Umuntu namuhla uzungezwe Izinsiza kakhulu: izilimi ukudla, amathelevishini amakhompyutha, blender, kettles kagesi ... Senza kube lula ukuphila kwakho, kuhlanganise inqubo wokugeza. umshini wokuwasha akuseyona into kanokusho. A egeza nokugeza powder - kukhona imiqondo nolimi. Ukuhlanzeka nokuhlanzeka - iyingxenye ebalulekile ezimpilweni zethu: izihlanzi uneminye uwayehlalise, kanye imishini yokuwasha ku cishe kunoma iyiphi ekhaya.
Abakhiqizi ngokucace uqaphela isidingo abathengi. Ukugeza izimpushana ekhiqizwa amafemu amaningi, kodwa hhayi wonke umuntu angakwazi ozibongayo bokuphakama baso kwezinye abakhiqizi. Igama «Procter & Gamble» is Cishe zonke isakhamuzi abazi Russia ezaziwayo. Inkampani encane usuqaliwe ekukhiqizeni amakhandlela insipho, yaphenduka corporation omkhulu. brand ayo athandwa kakhulu phakathi baseRussia. Lokhu powder Elithi "Ariyeli", "Amanga," "Tide," "Tix".
Modern izihlanzi zenziwa sinombono kahle iphume izingubo, kanye ukuvikela ingaphakathi umshini wokuwasha kusukela lime esikalini kuphangwa. I powder Elithi "Ariyeli", "Tide" futhi "isicwebezelisi" nezinye softeners ahlukahlukene wanezela.
Ukumaka kwikhava "ayikwazi ukusulwa"
Scale ukwakheka kuyinto nosawoti okuqinile equkethe. Zivela inqubo ukuhwamuka kwamanzi. Izingxenye ngokumelene imfundo yabo musa njalo ukuzigcina bephephile maqondana ethile izicubu izona izingubo. Ngenxa yale njongo, kahle kungase kutholakale egeza powder Elithi "Ariyeli", "Tide," "Rex" - izindlela ukuxwayisa umthengi a umbhalo oqoshiwe ekhethekile on the isembozo, lapho hhayi ukuzisebenzisa. Ngokwesibonelo, akukuhle ukusula lezi izimpushana yoboya nosilika izinto.
Kanjani ungasebenzisa powder?
Ukugeza powder Elithi "Ariyeli", njenganoma iyiphi enye, unendlela yawo usuku lokuphelelwa isikhathi. Abanye abantu bakholelwa ukuthi alinaso imingcele, futhi ujabulele yokuwasha ilondolo okwesikhathi eside kunokujwayelekile kuye. I Kunconywa eshalofini yokuphila - hhayi ningi than iminyaka emithathu. Ihlangana futhi eshalofini yokuphila ephansi - iminyaka 2 kuphela.
Kukhona yokuwasha ilondolo enikeza izinto ezimhlophe. Lokhu powder Elithi "Ariyeli Isazi" (Ariel Isazi). Kungani udumo lwakhe?
ugeza Kalula izinto nanoma yimuphi degree zalesi sithako.
Zonke ezintsha tibheke kuwo.
Akhipha amabala ezisele ngemuva kokusebenzisa udayi yemvelo.
Iqukethe ibhalansi enzyme (enzyme), kuhlanganise Celluclean, okuyinto enomthelela kuncishiswe ukungcoliswa kwezicubu.
It has a iphunga ukukhanya.
Kuyadingeka ukuba bagcine imithetho ethile ukusetshenziswa, ukuthenga noma yimuphi yokuwasha, kuhlanganise uyawuthanda ukuthandwa okukhulu Elithi "Ariyeli":
Ukugeza powder kufanele agcinwe aphume kude nezingane.
Lapho sishayisa nabo iso kufanele siyakazwe ngamanzi ashisayo ukugijima.
Ngemuva kokusebenzisa amathuluzi owadingayo ukuze begeza izandla zakho futhi omile, ukuthambisa ukhilimu.
Uma isikhumba ezandleni zakho kuyinto ebucayi kakhulu, iyiphi yokuwasha kuba yingozi uma kuqhubeka isikhathi eside contact nalo.
AA Amabhethri: lokho abayikho nalokho okufanele ngiyisebenzise?
Indwangu Izingubo: izici kanye nezinzuzo
Kuyini PR "VKontakte"? Indlela ukukhuthaza band?